Sodàna Atsimo: Hafatra momba ny #LoveFromSudan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2011 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, عربي, srpski, Italiano, 日本語, English
Ny ampitson'ny fahaleovantenan'i Sodàna Atsimo, nanangana vondrona hetsika ny tanora Sodaney izay miezaka hampisy fifanakalozana sy firahalahiana eo amin'ny Atsimo sy Avaratra ary hampifandray amin'ny alalan'ny aterineto ny tanora avy amin'ireo firenena roa ireo.
Mo Elzubeir no nifofotra voalohany tamin'ny fampielezana horonantsary, hafatra fandefasam-peo sy Twiter #lovefromsudan, ary navitrika aoka izany tamin'ny fampandrosoana ny firahalahiana sy ny finamanana eo amin'ny Sodàna Atsimo sy ny Avaratra.
Tamin'ny fahaterahan'ny firenena iray izay anisan'i Sodàna tamin'izany fotoana dia maro taminay no vaky fo. Tsy noho ireo loharanon-karem-be izay tsy hita intsony ankehitriny (betsaka tokoa). Nalahelo isika satria ny ampahany tamintsika, ny kolontsaina, ny vahoaka, ny olona marobe, dia nandeha samy manana ny lalany.
Raha ny marina anefa dia tsy manana na inona na inona aho fa tiako ny vahoaka Sodàna Atsimo. Maniry azy ireo hanana ny tsara indrindra aho ao amin'ny fireneny vaovao. Maniry ho azy ireo aho mba handroso sy hankafy izany fahafahana izany izay niadiany sy nitoloman”izy ireo hatry ny ela.
Hafatra misokatra ho an'ireo Sodaney maniry handefa mesazi-pitiavana ho an'ny ralahintsika sy ny rahavavintsika ao Sodàna Atsimo ity. Hafatra alefa amin'ny horonantsary na/fandefasam-peo tsy mihoatra ny 10 segondra, hafatra marobe araka izay tratra no atao mba hanehoana ny fanohanantsika ny vahoaka Sodàna Atsimo.
Ity ambany ity lahatsary ahitana rakitsary, Taratasim-pitiavana ho an'i Sodàna Atsimo ary Feno fitiavana avy amin'i Sodàna, izay notontosain'ny vondrona tanora #fitiavanaavyamin'iSodàna, sy tweet maro be mikasika ny fitiavana avy amin'i Sodàna:
Fisantarna miaraka amin'ny Fitiavana avy amin'i Sodàna:
#LoveFromSudan -Taratasim-pitiavana an'i Sodàna:
#LoveFromSudan – Hafatra feno fanantenana avy amin'i Sodàna Avaratra, amin'izao andron'ny fahaleovantenan'i Sodàna Atsimo izao. http://fb.me/10vyg0PO4
#LoveFromSudan tokony handroso tanteraka ary hazavaina amin'ny vahoaka fa avy amin'ny fahaverezana no hisian'ny fanararaotana vaovao mba hankafy izay hananantsika.
Tsara kosa! mashallah, atsy ho atsy dia mety hahatratra mpijery 1000 ny horonantsary #LoveFromSudan ao anatin'ny 24 ora… tsara ny zava-bitan'ny ekipa! http://ow.ly/5Az0D
Ary ny bilaogiko miantsoantso fanohanana ny #LoveFromSudan eto: http://t.co/CQejmMP #2Sudans
#LoveFromSudan – Taratasim-pitiavana ho an'i Sodàna Atsimohttp://t.co/BffBDXc
Tsy fanehoana fitiavana fotsiny ihany ny LoveFromSudan. Tsy mampisy olana izay voambolana ampiasaina. Fa momba ny fanajana ny safidy sy fandefasana ny faniriantsoa tanteraka izany.
#LoveFromSudan: Taratasim-pitiavana ho an'i Sodàna Atsimo http://t.co/r344h9P via @elzubeir! Antenaina fa hihaino sy hijery ny vahoakany ny mpanao politika:)
Arahabaina Sodàna Atsimo! Firenena vao haingana manerantany (#193) & firenena faha 54 ao Afrika, http://t.co/K7jLA85 The #LoveFromSudan mamelombelona.
Aoka izay ny momba antsika koa. Manantena aho fa ho tapahin'ny olon'ny #SouthSudan ny fironana Afrikanina manangana ny fireneny vaovao tsy misy ady. #LoveFromSudan
Mozambika 16 ora izay